२०१ Stat तथ्या and्क र सामाजिक मिडिया मा व्यवसाय को लागी Martech Zone
२०१ Stat तथ्या and्क र सामाजिक मिडियामा व्यवसायका लागि प्रचलनहरू
बुधबार, अक्टोबर 1, 2014 मंगलवार, सेप्टेम्बर 1, 2015 Douglas Karr
सामाजिक मिडिया कतै गइरहेको छैन, र व्यवसायहरूले अब महसुस गरे कि यदि उनीहरू आफ्नो सम्भावना र ग्राहकहरू सम्म पुग्न चाहन्छन् भने, सामाजिक मिडियामा तिनीहरूको अनलाइन उपस्थिति उनीहरूको समग्र मार्केटिंग रणनीतिको आधार हो। यो इन्फोग्राफिक एक गहन गहन दृश्य हो, उद्योग, मध्यम र सामाजिक च्यानल द्वारा कसरी व्यवसायहरूले उपभोक्ताहरूसँग जडान हुन सोशल मिडियाको लाभ उठाउँदै।
दुबै साना र ठूला व्यवसायहरू सार्वजनिक विचारमा सामाजिक मिडिया प्रभावकारीहरूले लिने प्रभावलाई महसुस गर्छन्। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि कम्पनीहरूले यी प्रभावकारीहरूलाई विभिन्न सामाजिक मिडिया साइटहरूमा खोज्छन् र तिनीहरूलाई नि: शुल्क उत्पादन नमूना पठाउँछन् समीक्षा गर्न। निम्न इन्फोग्राफिकमा, सामाजिक मिडियामा व्यवसाय - तथ्या .्क र प्रचलनहरू, गो-गल्फले धेरै तथ्या .्कहरू र प्रवृत्ति प्रस्तुत गर्दछ कि ब्यापारहरूले कसरी सामाजिक बृद्धि गर्न ड्राइभको ब्यबहार गर्छ।
टैग: b2b सोशल मीडियाव्यापार भावनाव्यवसाय सामाजिक मीडिया तथ्या .्कछुटहरूफेसबुक व्यवसाय अपनाउनेगुगल + व्यवसाय अपनाउनेप्रति दिन कति मिनेटइन्स्टाग्राम व्यवसाय अपनाउनेलक्जरी ब्रान्डमोबाइल सामाजिक मिडियाpinterest व्यवसाय अपनाउनेपदोन्नतिसामाजिक मिडियामा ब्रान्ड अनुसरण गर्नका कारणहरूएसएमबी सामाजिक मिडियासामाजिक संजालसामाजिक मिडिया छुटसामाजिक मिडिया पदोन्नतिहरुसामाजिक मिडिया खरीद तथ्या .्कसामाजिक मिडिया भावनासामाजिक मिडिया प्रकारको सामग्रीसामाजिक नेटवर्किंग तथ्या .्कट्विटर व्यवसाय अपनाउनेट्विटर खरीद व्यवहार
ग्राफिक मन पराउनुहोस्! अब मेरो अनुयायीहरूसँग साझेदारी गर्दै! सोशल मिडिया आज व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ, तर म अझै आश्चर्यचकित छु कति जनाले यसलाई गलत तरिकाले गर्छन्। यो महत्त्वपूर्ण छ र राम्रो समयको साथ काम गर्न को लागी केहि अनुसन्धान गर्न र सोशल मीडिया मार्केटिंगमा पठन गर्नको लागि यसलाई सही तरीकाले कार्य गरिरहेको छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्!
धन्यवाद ब्रान्डन! सम्मानका साथ - मलाई कम्पनीको रूपमा सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्ने "सहि" वा "गलत" तरिकाको बारेमा निश्चित छैन। म केहि देख्छु कि केवल ट्वीट विज्ञापन र छुट - तर तिनीहरूले केहि महान छुटकारा दर प्राप्त गर्दछ त म न्याय को हो? मलाई लाग्छ प्रत्येक कम्पनीले प्रयोग गर्न र तिनीहरूको र उनीहरूको दर्शकलाई के काम गर्छ भनेर हेर्न आवश्यक छ।
डिसे 24, 2014 मा 6: 46 AM
तपाईंको चित्रात्मक प्रतिनिधित्व गजबको छ र मैले यसबाट धेरै कुरा पनि सिकें। यो सजीलो रूपमा वर्णन गरिएको थियो! महान काम साथी
जनवरी १, २०१ 22 १२::2015 अपराह्न
यो एक अद्भुत वेब पृष्ठ हो। सहयोगी भन्दा परे, धन्यवाद
सामाजिक कूपनहरू ब्रान्ड वफादारी छुटको माध्यम बाट निर्मित हुन्छ कि फ्यालेसीलाई सुदृढ पार्दछ। यो केवल अस्थायी रूपमा बिक्री बढाउने एक विधि हो।
फेब्रुअरी १,, २०११ 20:१:2015 अपराह्न
मलाई थाहा छैन म पूरै सहमत छु। यदि तपाइँको ग्राहकहरु लाई लाग्छ कि तपाइँ संग लामो समय सम्म चिपकाउन को लागी एक प्रोत्साहन छ, तिनीहरू प्राय: तपाई संग टाँसनेछन्। धेरै जसो कम्पनीहरूले यसको विपरित गर्छन्। तिनीहरूले नयाँ ग्राहकहरूको लागि छुट दिन्छन् र त्यसपछि अवस्थित ग्राहकहरूलाई अपचार्ज गर्दछन् ... जसले यसको सट्टा कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
मार्क्स 13, 2015 मा 6: 37 PM
जानकारी ग्राफिकको साथ महान जानकारी। म सोशल मीडियाको शक्तिशाली प्लेटफर्मको सम्बन्धमा ग्राहकहरूसँग साझेदारी गर्नेछु। प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यबाद!
मार्स 30, 2015 मा 9: 59 एएम
वास्तवमै उपयोगी! यदि तपाईं आपत्ति मान्नुहुन्न भने, म यो मेरो इन्फोग्राफिकको लागि प्रयोग गर्न सक्छु? (म डिजाईन स्कूलको विद्यार्थी हुँ)
मार्स 30, 2015 मा 10: 49 एएम
तपाईंले मूल डिजाइन कम्पनीलाई इन्फोग्राफिक, रोक्सीमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। शुभकामना।
अप्रिल 14, 2015 मा 2: 35 एएम
आज, सोशल मिडिया अर्को खोजी ईन्जिन बनिएको छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले वास्तवमा उत्पादनहरू वा सेवाको बारेमा विस्तृत जानकारी खोजिरहेका छन्। ठूला ब्रान्डहरु पनि सामाजिक मिडिया मा आफ्नो अनलाइन उपस्थिति सुधार गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दै छन्।